‘काठमाडौंको सडकमा हिंड्दा मुखमा मास्क लगाउन नपरोस्’ | नयाँ शक्ति नेपाल
- २२ वैशाख, २०७४
उम्मेदवार उपप्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौंको न्यूरोडस्थित टेबहालमा २०३० सालमा जन्मिनुभएकी सबिना अर्यालले १९ वर्षको किशोरावस्थादेखि नै सक्रिय राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो । २०४९ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालमा आवद्धभएसँगै राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी अर्याल २०६६ सालमा एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुभयो र अहिले उहाँ नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ । आउँदो वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट काठमाडौं महानगरको उपप्रमुख पदमा साझा उम्मेदवार बन्नुभएकी उहाँसँग चुनावकै परिवेशमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं अहिले नयाँ शक्ति पार्टीबाट काठमाडौं महानगरको उपप्रमुख पदको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ, तपाईंलाई चुनावमा उठ्न के ले प्ररित गर्यो ?
पहिलो कुरा काठमाडौंमा जति पनि शासकहरु आए, ती कसैले पनि काठमाडौंलाई सुव्यवस्थित ढंगले विकास गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । काठमाडौंलाई आधुनिक समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा लैजान सकेनन् । बरु उल्टो उनीहरुले यहाँको प्राचीन व्यवस्था र सभ्यताहरुलाई उल्ट्याइदिए र आफूहरु समृद्ध भए । तर, काठमाडौंलाई समृद्ध बनाउने बारे कहिल्यै सोचेनन् । बरु काठमाडौं अभाव र अव्यवस्थाको सहर बन्न पुग्यो । त्यसैले मैले यो सहरलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउनकै लागि आफूलाई उम्मेदवारको रुपमा उभ्याएकी हुँ ।
अर्को म आफैं महिला उम्मेदवार भएको हुनाले र देशको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या महिलाको भएको कारणले नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी हुन्छ र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न महिला सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरालाई व्यवहारमै लागू गर्न आफू उम्मेदवार बनेकी हुँ । साथै नेतृत्व तहमा रहेर मात्र महिलाका मुद्दाहरुलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले नै मलाई उम्मेदवारी दिन प्रेरित गर्यो ।
तपाईं काठमाडौंमै जन्मनुभयो र आफ्नो बाल्यकाल पनि यहिं बिताउनुभयो । अहिले काठमाडौं सहरलाई नयाँ बनाउन भन्दै उपमेयर पदमा लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले हिजो देखेको काठमाडौं र आजको काठमाडौंमा के फरक पाउनुभएको छ ?
म जतिबेला केटाकेटी थिएँ, त्यतिबेलाको काठमाडौं र अहिलेको काठमाडौंमा आकाश जमिनको फरक पाउँछु । किनभने पहिलेको काठमाडौं सफा, स्वच्छ र हराभरा थियो । मेरो जन्मघर नै न्यूरोडमा हो र त्यो बेला भृकुटीमण्डपमा खेत थियो । त्यहाँको खेतमा किसानहरु धान फलाउँथे, तरकारी फलाउँथे । त्यहाँको हरियो धनियाँको बासना न्यूरोडसम्म आइपुग्थ्यो । तर, अहिले आउँदा जताततै प्रदूषण मात्रै देखिन्छ । सडकहरु फोहोर र अव्यवस्थित देखिन्छन् । जतापनि अव्यवस्थित र तनाव मात्रै हुने परिस्थिति अहिले छ । काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँसम्म छैन । छोटोमा भन्नुपर्दा पहिलेको काठमाडौं स्वर्ग थियो, तर अहिलेको काठमाडौं (म आफ्नो ठाउँलाई नर्क त भन्न चाहन्न) अत्यन्तै अव्यवस्थित छ ।
तपाईंले यहाँको अव्यवस्था र सहरबासीको समस्यालाई इंगित गर्नुभयो । तपाईंको विचारमा काठमाडौंका मुख्य ५ समस्याहरु केके हुन् ?
काठमाडौंको मुख्य समस्या भनेकै हरेक कुराको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै हो । बुँदागत रुपमै भन्नुपर्दा यहाँको मुख्य पाँच वटा समस्या भनेको प्रदुषण, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम र सवारी आवागमनमा वाधा, पानीको अभाव र अव्यवस्थित आवास अर्थात् सहरिकरण नै हो । साथै भ्रष्टाचार र कुशासन पनि देशकै स्थायी समस्या जस्तो भएर आएको छ । दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका यिनै समस्याहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दै उपत्यकावासीको समय गुज्रिने गरेको छ ।
यहाँको विचारमा यी समस्याहरु कसरी समाधान हुन्छ ?
मूलतः यिनै समस्याहरु यहाँको मूल अव्यवस्थाको कारण पनि हो । यसर्थ, यसको समाधान गरेरै सुन्दर काठमाडौं बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो प्रण हो । प्रदूषणको समस्या समाधान गर्नका लागि सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ, अव्यवस्थित रुपमा संचालित ससाना उद्योग धन्दाहरुलाई निस्कने धुवाँ तथा फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सहरमा निस्कने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव अनुसार काम गर्ने योजना बनाएको छु ।
कुनैपनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सवालमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने नै यसको समाधान पनि हो । यसर्थ, सहरका समस्या र बेथितीहरुको उचित व्यवस्थापन नै मुख्य कुरा हो । फोहोर व्यवस्थापनकै लागि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चोभारमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम सुरु भएको थियो तर, यहाँका राजनीतिक दलहरुले भाँजो हालेर त्यो काम हुन सकेन । काठमाडौं भन्दा नजिक रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुमा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गरेर फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
साथै हामीले पुनः प्रयोगलाई पनि जोड दिनुपर्छ र फोहोर प्रशोधन प्लान्टको स्थापना गरेर फोहोरबाटै हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं । फोहोर व्यवस्थापनको माध्यमबाट उत्पादन गर्ने बायोग्यासले पूरै काठमाडौंलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ । फोहार व्यवस्थापनसँगै काठमाडौंलाई दीर्घकालीन रुपमा लोडसेडिंग मुक्त बनाउन संभव छ । त्यसैगरी काठमाडौंको जटिल खानेपानी समस्या समाधानका लागि पनि हामीले दीर्घकालीन रुपमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले अहिलेसम्म ठूला ठूला योजनाको मात्रै कुरा गर्यौं । त्यसैमा समय र स्रोत खर्च गर्ने परिपाटी निर्माण भएको छ । तर, हामीले यहाँकै स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सक्छौं । काठमाडौंका लागि मेलम्ची योजना लामो समयदेखि प्रतिक्षाको विषय बन्न पुगेको छ, अब यसको साथसाथै हामीले काठमाडौं वरपर रहेका ससाना खोलानाला, छाँगा छहरा पानीका स्रोतहरु हुन् । ती स्रोतहरुलाई हामीले किन उपयोग नगर्ने ? त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले उपयोग गर्ने हो भने त्यसले काठमाडौंसँगै यस आसपासका क्षेत्रहरुमा पनि पानीको समस्या हुँदैन ।
काठमाडौं महानगरमा २ लाख ८४ हजार मतदाता छन्, भोट माग्नका लागि ती मतदातासम्म पुग्ने योजना के छ ?
हेर्नुस्, यो जमाना इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाको जमाना हो । फेरि काठमाडौंका सबैजसो मतदाताहरु चेतनशील, शिक्षित र प्रविधि मैत्री पनि छन् । त्यसकारण यो संचारको दुनियाँमा हामी इलेक्ट्रोनिक्स मिडियामार्फत उहाँहरु समक्ष पुग्छौं । साथै हामी दिनहुँ घरदैलो कार्यक्रमहरु पनि जारी राख्नेछौं र दैनिक ४/५ वटा कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा संचालन गरिरहेका पनि छौं । हामी सबै मतदातासमक्ष पुग्ने छौं । साथै म व्यक्तिगत उम्मेदवार मात्र पनि होइन, मसँग सिंगो पार्टी पंक्ति छ, पार्टीमार्फत पनि हामी चुनाव प्रचारका लागि प्रत्येक मतदाताको घरदैलोमा पुग्नेछौं ।
तपाईंहरुको चुनावी अभियान एकल हुन्छ कि संयुक्त ?
संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्यमै हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुनाले उहाँहरुसँग हामी संयुक्त रुपमै चुनावी अभियान संचालन गरिरहेका छौं । यसका लागि हामीले चुनावी संयन्त्र निर्माण पनि गरेका छौं । हामी त्यो संयन्त्र मार्फत पनि संयुक्त कार्यक्रमहरु संचालन गर्दैछौं ।
तपाईं उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, चुनावमा विजयी हुनुहोस् शुभकामना छ । साथै तपाईंले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईंले गर्ने कामको योजना के छ ?
पहिलो कुरा तपाईंलाई शुभकामनाका लागि धन्यवाद । यहाँको मुख्य समस्या जसरी अघि पहिचान गरियो तिनै समस्याहरु समाधान गर्ने नै मेरो मुख्य लक्ष्य र योजना हुनेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले एउटा विज्ञहरुको टिम बनाएर सुझाव लिनेछु र आफ्नो कार्ययोजना अनुरुप ती समस्या समाधानमा क्रियाशील हुने नै मेरो योजना हो ।
तपाईं उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभयो भने कस्तो काठमाडौं बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
मैले कल्पना गरेको काठमाडौं, सबैभन्दा पहिले धुँवाधुलोरहित स्वच्छ र हराभरा हुनेछ । कम्तीमा यहाँका मान्छे सडकमा निस्किँदा मुखमा मास्क लगाएर हिंड्नु नपरोस् । अर्को यहाँका सडकहरु फराकिला र सफा हुनेछन् । सहरमा ढल, पानी, बिजुलीका सबै समस्या हल होस् । यहाँका जनता उज्यालोमा बस्न सकून् । ऊर्जाको विकल्प खोज्नु नपरोस् । ठाउँठाउँमा पार्क अनि पैदलयात्री र साइकलयात्रीका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित बाटो होस् । केटाकेटीहरुको वृत्तिविकासका लागि खेल्ने बगैचाहरु होस् । शान्त होस्, कोलाहल नहोस् । यस्तै यस्तै शान्त, सुरम्य र सुन्दर काठमाडौं बनाउनको लागि म हरसंभव प्रयत्न गर्नेछु ।